re-subscription ကိုFILERECOVERY®ဆော့ဝဲ Mac အတွက်နဲ့ PC | Data Recovery
re-subscription ကိုFILERECOVERY®ဆော့ဝဲ Mac အတွက်နဲ့ PC
နေအိမ် → re-subscription ကိုFILERECOVERY®ဆော့ဝဲ Mac အတွက်နဲ့ PC
အဖြစ်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့စကားများထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် “ဖိုင်ရှာမတွေ့ပါ”, “ကဒ်မှားယွင်းနေသည်” သို့မဟုတ် “image ကို Deleted” ပင်ကိုအများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအများ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, ယာဉ်မတော်တဆမှုသည်ဧကန်အမှန်အဖွစျနိုငျ. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်နေဖြင့်, သငျသညျအနာဂတျစေသမျှအဘို့ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့ အဆင့်မြှင့်စျေးနှုန်းတစ်ဦးငွေစုဖြစ်ပါသည် 50% လက်လီစျေးနှုန်းကိုချွတ်!
သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သော RAID ထောက်ခံမှုအဖြစ်နောက်ထပ် features တွေများအတွက် Professional ကဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်. တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဇယားများအတွက်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု..
FILERECOVERY နျ Standard Windows ကို $34.95
FILERECOVERY Pro ကို Windows ကို ** $49.95
*Windows ကို® XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10, **RAID ပံ့ပိုးမှု
FILERECOVERY နျ Standard Mac အတွက် $34.95
FILERECOVERY Pro ကို Mac ကို ** $49.95
*mac OS နဲ့ 10.8 သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်, **RAID ပံ့ပိုးမှု
** MacOS မှတ်ချက် 10.15 USER - ဤဆော့ဖ်ဝဲပဲဖြန့်ချိ MacOS နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်မဟုတ်ပါဘူး 10.15 (Catalina) ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်, စနစ်တကျကြောင်း OS ကိုအပေါ်ကို run မည်မဟုတ်.
ဒီဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု updated version ကို, MacOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်လတံ့သော 10.15 (Catalina), အလွန်မကြာမီဖြန့်ချိလိမ့်မည်. **